ဝက်အူချောင်းနှင့်အတူ Solyanka - ကြက်သားနှင့်အတူဟင်းချိုများအတွက်ချက်ပြုတ်နည်းများ, အာလူးများနှင့်သံလွင်သီး။ multivarka အတွက်သောက်သည်ဝက်အူချောင်းနှင့်အတူ hodgepodge ချက်ပြုတ်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
ဝက်အူချောင်းနှင့်အတူ Solyanka - မွတ်မပြေနိုင်သောနှင့်ရုရှားအစားအစာ၏ရိုးရှင်းသရုပ်ဖော်တဲ့စာရွက်။ အိမ်ဝက်နာရီဗားရှင်းအတွက်တစ်ချိန်ကလိုအပ်နာရီပေါင်းများစွာပြင်ဆင်ထားရန်အဆိုပါဂန္ပန်းကန်ပေါများကြွယ်ဝခြင်းနှင့်မတူကွဲပြားမှုအံ့သြသွားနိုင်ပါတယ်။ ကံကောင်းထောက်မစွာ, ခေတ်မီသောအစားအစာ၏လက်နက်တိုက်သည်ကြီးအမြဲစိတ်ကူးစိတ်သန်းကိုပြသကူညီပေးသည်။
ဝက်အူချောင်းနှင့်အတူ hodgepodge ချက်ပြုတ်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
Hodgepodge ဝက်အူချောင်းအဆိုပါ eponymous ပန်းကန်၏ဗားရှင်းကျော်အားသာချက်များစွာရှိပါသည်။ ဤသည်မကြာခဏရေခဲသေတ္တာထဲမှာပျောက်ကွယ်, အမဲသားအခြေအနေမျိုး၏စွန့်တဲ့လမ်း, ဒါပေမယ့်လည်းဖြင့်ပိုင်ထိုက်သောပူပုံရိပ် "Collection" ကိုအလေးပေးသော, အာဟာရနှင့်သိပ်သည်းဆပေးသောဟင်းသီးဟင်းရွက်များနှင့်အစေ့သုံးစွဲဖို့အခွင့်အလမ်းမသာဖြစ်ပါသည်။
ချက်ပြုတ်တဲ့အခါမှာ kasha ပါဝင်ပစ္စည်းများအပေါ် skimp မနေသင့် - ပိုအခိုးအငွေ့သည်ထက်ပိုသောပြည့်နှင့်မွှေးကြိုင်အခြေစိုက်စခန်း။
ချက်ပြုတ်သည့်အခါ "raspolzutsya" မဟုတ်သောအရာအချဉ်နှင့်ငန်တဲ့ချိန်ခွင်လျှာဖန်တီးခြင်းအတွက်အရေးကြီးသောအရာတခုစာရွက်, နှင့်ထို့ကြောင့် crunchy Pickled အသုံးပြု - ဝက်အူချောင်းနှင့်အတူ Solyanka ။
ဝက်အူချောင်းနှင့်အတူ Solyanka ဟင်းချို - စာရွက်
ဝက်အူချောင်းနှင့်အတူ Solyanka ဟင်းချို - တစ်ဦးချင်းစီအပိုင်းအစတစ်ဦးကိုချက်ချင်းဇွန်းသို့ရတယ်ဒါမှဥပဒေများ၏ပြင်ဆင်မှုအဘို့, ညီတူညီမျှဖြတ်, ဝက်အူချောင်းလေးအမျိုးအစားများပါဝင်ရပါမည်တဲ့ကြွယ်ဝသောမူဘောင်ပါဝင်သည်ဟုအရသာကြွယ်ဝတစ်ပန်းကန်။ နည်းပညာဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုလိုက်နာခြင်း, ငါတို့အောင်မြင်မှုစားဖိုမှူးရဲ့စွမ်းရည်၌၎င်း, ထုတ်ကုန်အမျိုးမျိုးထဲမှာမသာတည်ရှိသည်ကြောင်းကို၎င်းအောက်မေ့ရမည်ဖြစ်သည်။
ပါရဂူဝက်အူချောင်း - 150 ဂရမ်;
ဆလာမီ - 250 ဂရမ်;
saveloy - 150 ဂရမ်;
Pickled -3PCs; ။
ခရမ်းချဉ်သီးငါးပိ - 70 ဂရမ်,
သံပုရာ - 1/2 PCs; ။
သံလွင်သီး - 10 PCs ။
ထို့အပြင်ဝက်အူချောင်းနှင့်သံလွင်သီး၏ Cube ရှိပါတယ်ထည့်ပါ။
ဝက်အူချောင်းနှင့်အတူ Solyanka - အစိမ်းရောင်နှင့်သံပုရာနှင့်အတူအလှဆင်လျှောက်ထားသည့်အခါတစ်ဦးစာရွက်။
ဝက်အူချောင်းနဲ့အသားနှင့်အတူ Solyanka - စာရွက်
ကြက်သားနှင့်အတူ Solyanka နှင့်ဝက်အူချောင်း - အကောင်းဆုံးခိုင်မာတဲ့ဟင်းရည်ကသူ့ထုံးစံအတိုင်းအခြေခံအတူပူပြင်း၏အစဉ်အလာအမြင်နဲ့ကိုက်ညီမယ့်ပန်းကန်။ ရရှိနိုင်သောဘဏ္ဍာရေးကြက်အသုံးပြုခြင်း, ချက်ပြုတ်အချိန်လျှော့ချရန်ကူညီပေးပါမည်တစ်ဦးပြည့်ဂန္ထဝင်အရသာအောင်မြင်ရန်နှင့်ကအိမ်လုပ်အစားအစာများ၏ဘတ်ဂျက်ကျော်လွန်မသွားဘူး။
ကြက်သားပေါင် - 450 ဂရမ်;
သောက်သည်ဝက်အူချောင်း - 250 ဂရမ်;
Pickled -4PCs; ။
သံလွင်သီး - 15 PCs ။
ကြော်အတွက်ဝက်အူချောင်း၏ချပ်, သခွားသီး add, အမဲသားကိုမှသူတို့ကို ထား. , သံပုရာ, သံလွင်သီးများနှင့် 10 မိနစ်ချက်ပြုတ်။
ဝက်အူချောင်းနှင့်အတူ Soljanka ကြက်သား - တစ်နှစ်ခွဲနာရီကြွင်းသောအရာလိုအပ်တယ်တဲ့စာရွက်။
ဝက်အူချောင်းနှင့်အတူ Solyanka ဟာအဆုံးမဲ့မူကွဲတာမျိုး။ ဘယ်နှစ်ယောက်ချက်ပြုတ်နည်းများကိုပြောင်းလဲကြပြီမဟုတ် - သံလွင်သီးကိုအစဉ်အမြဲသင့်လျော်သောဖြစ်ကြပြီးတစ်ဦးဂန္အစာကျွေး၏ဆင်တူဖြစ်ကြသည်။ ထိုသို့သော gastronomic ဘားအမွှေးအကြိုင်ကထပ်ပြောသည်နှင့်ပန်းကန်ဖြည့်စွက်ရန်ကူညီပေးသည်။ ရေရှည်ကုသမှုဖွဲ့စည်းပုံဖျက်ဆီးသောကြောင့်သူတို့မကုန်မီမကြာမီအုပ်ချုပ်ဖြစ်ကြောင်း ကျေးဇူးပြု. သတိပြုပါ။
သောက်သည်ဝက်အူချောင်း - 150 ဂရမ်;
ဝက်အူချောင်းအမဲ - 250 ဂရမ်;
သံလွင်သီး - 200 ဂရမ်;
gherkins - 200 ဂရမ်;
ငါးပိ -3tbsp ။ ဇွန်း။
သခွားသီး, သံလွင်သီးများနှင့်သံပုရာနှင့်အတူချိတ်ဆက်ပါ။ ရေ2လီတာအတွက်သွန်းလောင်း။
သောက်သည်ဝက်အူချောင်းနှင့်အတူ Solyanka 10 မိနစ်ပြင်ဆင်နေ။
ဝက်အူချောင်းနဲ့အာလူးနဲ့ Solyanka - စာရွက်
ဝက်အူချောင်းနဲ့အာလူးနဲ့ Solyanka - နိမ့်ဆုံးအစားအစာနှင့်အမြင့်ဆုံးအရသာအကွာအဝေးနှင့်အတူပူပြင်းမွှေးပန်းကန်တက်ဝတ်ပြုဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်း။ ၏ရှေ့မှောက်တွင် ကြွယ်ဝသောဟင်းရည် မလိုအပ်ပါဘူး။ ဒါဟာမိနစ်အနည်းငယ်အဘို့အပြုတ်, ရေပွက်ပွက်ဆူနေသောအာလူး Cube အတွက်ထားနှင့်တစ်ဦး starchy အခြေစိုက်စခန်းလက်ခံရရှိထားရမည်, ထုတ်ကုန်၏ကျန်အိပ်လေ၏။
ခရမ်းချဉ်သီးငါးပိ -3tbsp ။ ဇွန်း,
သံလွင်သီး - 10 PCs; ။
သံပုရာချပ် -4PCs; ။
ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အရွက် - 1 pc; ။
အချဉ်မုန့် -3tbsp ။ ဇွန်း။
ဝက်အူချောင်း, ခုတ်, saute နှင့်အာလူးနဲ့ချိတ်ဆက်ပါ။
, ထိုဟင်းရည်ထဲသို့ preform ထားပါ5မိနစ် Laurel, သံလွင်သီးများနှင့်အနာစိမ်းပေါင်းထည့်ခြင်းနှင့်ဘေးဖယ်ထားကြ၏။
ဝက်အူချောင်းနှင့်အတူ Solyanka - ချဉ်မုန့်နှင့်သံပုရာချပ်အဆိုပါပန်းကန်ထဲကအပတ်လည်၌ဖြစ်သောတစ်ဦးစာရွက်။
အနီးကပ်အစားအစာများ၏သမိုင်းနှင့်အတူဆက်နွယ်နေဝက်အူချောင်းနှင့်အတူ halophytes ၏ပြင်ဆင်မှု။ ညံ့ဖျင်းသောလူသားရဲ့ဘီယာအရက်ချက်တဲ့အထူ, ချ-ချဉ်သို့မဟုတ်လတ်ဆတ်တဲ့ဂေါ်ဖီထုပ်၏ထို့အပြင်နှင့်အတူဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၏အများစုပါဝင်သည်ဟု, ဂန္ထဝင်ရုရှားဆူးပင်၏တည်ထောင်သူဖြစ်လာပြီးမတူကွဲပြားမှုနောက်ဆုံးပေါ့်အရသာမက, ဒါပေမယ့်လည်းအာဟာရများနှင့်ရွှဲအောင်မြင်ရန်ကူညီပေးဖို့။
ပြုတ်ဝက်အူချောင်း - 230 ဂရမ်;
ပင်ပေါက် - 450 ဂရမ်;
ketchup -4tbsp ။ ဇွန်း,
မိနစ် 30 မျှတည်ထားပါဖျက်စီးရမဲ့ဂေါ်ဖီထုပ်။
ကြက်သွန်နီနှင့်မုန်လာဥကြော်, အဝက်အူချောင်းထည့် ketchup ။
အားလုံးအစိတ်အပိုင်းများကိုပေါင်းစပ်နှင့် 10 မိနစ်ချက်ပြုတ်။
အိမ်မှာဝက်အူချောင်းနှင့်အတူ Solyanka ပြီနောက်ဟင်းအတွက်ထုတ်ကုန်များကိုနှေးကွေးစိတ်ပျက်၏အမျိုးမျိုးကိုဆိုလိုသည်, ဤများစွာသောပုံမှန်အတိုင်းဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့်ဝက်အူချောင်းတဖဲ့၏စုံတွဲတစ်တွဲကနေမသာကြွလာ, ဒါပေမယ့်လည်းမှိုကြိုတင်သိုလှောင်။ သူတို့ကအရသာတစ်ခုခုမွေးရာပါသောင်းကျန်းရုရှားအိတ်ဖန်တီးအရသာ add နှင့်ပန်းကန်တစ်ခု appetizing အသွင်အပြင်ကိုငါပေးမည်။
ဆလာမီ - 180 ဂရမ်;
ဝက်အူချောင်းအမဲ - 230 ဂရမ်;
ငါးပိ -2tbsp ။ ဇွန်း,
multivarka အတွက်ဝက်အူချောင်းနှင့်အတူ Solyanka - စာရွက်
ရိုးရှင်းသော solyanka အကြောင်းရင်း multivarka ယူပါလိမ့်မယ်လျှင်ဝက်အူချောင်း, နေ့တိုင်းမိသားစုမုန့်ညက်ဖြစ်လာသည်။ တစ်ဦးချင်းစီအစိတ်အပိုင်းကြော်မျိုးစုံအပေါ်အခြေခံပြီး Long ကချက်ပြုတ် technique ကိုပေးသောနှင့်အတူထုတ်ကုန်အရည်ရွှမ်း function ကို "ဟင်းချို" ကိုအစားထိုးခြင်းနှင့်ဒုက္ခမွှေးဂန္ထဝင်ပူဖြစ်လာစရာမလိုဘဲတစ်နာရီကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရန်။
ပြုတ်ဝက်အူချောင်း - 280 ဂရမ်;
gherkins - 8 PCs; ။
သံလွင်သီး - 12 PCs; ။
သည် "ဟော့" တွင်ထို့နောက်ဝက်အူချောင်းနှင့်ကြက်သွန်ပါရှိပါတယ်။
အဆိုပါခေါက်ဆွဲ, ရေ, အာလူး, Pickled, နှင့် "သတ် / ဟင်းချို" မိနစ် 30 ချက်ပြုတ်ချပြီးထည့်ပါ။
သံလွင်သီးများနှင့်သံပုရာနှင့်အတူထောက်ပံ့အရသာ solyanka ဝက်အူချောင်း။
ဆောင်းတွင်းအဘို့အမဲသားကိုမှ apricot ငံပြာရည်
အိမ်တွင်းဒိန်ခဲ pancake နှင့်အတူကျပ်
အိမ်မှာ Ham ဆို
အဆိုပါဆားရည်အိုင်များတွင်အဆီ - အရှိဆုံးအရသာစာရွက်
ဘာသာစကား Armenian စပျစ်သီးအရွက်များတွင် Dolma စာရွက်
ယို၏စပျစ်ရည်ကို - အိမ်မှာအရက်ရဲ့အကောင်းဆုံးချက်ပြုတ်နည်းများ
ရေတပ်အပြာ blazer ဝတ်ဆင်ရန်အဘယ်အရာ မှစ. ?
ချို့ယွင်းသော - နှောင့်နှေး၏အမှု၌ထိုး
ယောက်ျားလေးများ 5-11 လူတန်းစားများအတွက် School တွင်အိတ်
ဖက်ရှင်ဦးထုပ် - ဆောင်းရာသီ 2015
Fitton - အိမ်မှာစောင့်ရှောက်မှု
မွေးကို Magic နံပါတ်များနေ့စွဲ
ကျောက်ခေတ် "ကြက်သားဘုရားသခငျသညျ" - မှော်ဂုဏ်သတ္တိများ